जुनसुकै परिक्षाका प्रशिक्षार्थिले परिक्षा हलभित्र निम्न १० कुरा ख्याल गर्नुपर्छ (लोक तथा शिक्षक सेवा तयारी कक्षा भाग-२) – Jugal Khabar
खेल फिचर मनोरञ्जन शिक्षा समाज 89 Views
१.उत्तर पुस्तिकामा प्रष्ट रुपमा संकेत नम्बरसहित पुर्ण विवरण लेख्ने ।
२.उत्तरपुस्तिकाको दायाँ र बायाँतर्फ स्केलको सहायताले निश्चित भाग खालि राख्ने ।
३.प्रश्नपत्र हातमा परेपछि हरेक प्रश्न सरसर्ति अध्ययन गर्ने र प्रश्नले खोजेको के हो प्रष्ट हुने ।
४.जुन पदमा परिक्षा दिन लागिएको हो त्यो सेवा र पदमा आयोगले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम बारे स्मरण गर्ने ।
५.पदअनुसार एउटै विषयमा पनि फरक स्तरको ज्ञानको अपेक्षा गरिएको हुनेहुँदा परिक्षा दिन लागेको पदकालागि कुनस्तरको उत्तर चाहिन्छ त्यतिमात्र लेख्ने ।
६.प्रश्न हलगर्दा सकेससम्म क्रमश हल गर्दै जाने सजिलो पहिला र अफ्ठ्यारो प्रश्न पछि हलगर्दा समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ ।
७.प्रश्नको अंकभार अनुसार प्रश्नले खोजेको के हो बुझेर सोहिअनुसार उत्तर लेख्ने । थोरै वाक्यमा धेरै विषय समेट्ने प्रयास गर्दा समय व्यवस्थापन हुन्छ ।
८.उत्तर लेख्दा आफ्नो प्रस्तुति शैली अरुको भन्दा पृथक र विशिष्ट बनाउन प्रयास गर्ने ।
९.अक्षर सुन्दर र सादा कागजमा हरफ अनुशासन कायम गरी लेख्ने साथै उपयुक्त बलपेन प्रयोग गर्ने ।
१०.धेरै पढेर र जानेर मात्रै सफल हुने होईन यसका लागि प्रस्तुतीकरण उत्तिकै स्तरीय हुन जररुरी छ। हरेक प्रश्नको उत्तर लेख्ने मौलिक शैली बनाउनुहोस ।
थप सामान्य ज्ञानका प्रश्नहरु
हेनले पासपोर्ट इन्डेक्स २०२१ अनुसार नेपालको पासपोर्ट कति औं स्थानमा छ?
सन २०२१ मा नेपालको पासपोर्ट १०४ औं, तर २०२० मा १०१ औ र २०१९ मा १०२ औं थियो,संसारका कति मुलुकले भिषा नलगाइ ती मुलुकमा प्रवेश गर्न दिन्छन भन्ने आधारमा सुचि तयार गरिन्छ । यो सुचिमा लिविया संगै नेपाल परेको छ । सबभन्दा शक्तिशाली पहिलोमा जापानको पासपोर्ट, दोश्रोमा सिङ्गापुरको पासपोर्ट, तेस्रोमा दक्षिण कोरिया र जर्मनी, अन्तिमा अफगानिस्तान (११० औ) परेको भए भारतको पासपोर्ट ८५ औ र चीनको पासपोर्ट ७९ औ, भुटानको ९० औं स्थान छ । Visa Free Score भने नेपालको ३८ र जापानको १९१ (भिषा नलगाइ भ्रमण गर्न पाउने मुलुक) छ ।
सन २०२० अन्त्य सम्मको सम्पतिको आधारमा संसारकै धनी व्यक्ती को हुन?
ब्लुमबर्ग पत्रिकाका अनुसार संसारकै धनी व्यक्ति एलन मस्क बनेका छन यिनी कारकम्पनी टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र स्पेस एक्सका संस्थापक हुन । यिनको जन्म दक्षिण अफ्रिकामा भएको र हाल अमेरिकामा बस्दै आएका हुन । मस्कको सम्पत्ति १ सय ९१ अर्ब अमेरिकी डलर छ । दोस्रो धनि बेजोसको सम्पत्ति १ सय ८७ अर्ब छ भने बिल गेट्स तेस्रो नम्बरमा छन उनको सम्पति १ सय ३२ अर्ब डलर छ । मस्कको कम्पनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार निर्माता कम्पनी हो यो वर्ष कम्पनीले बिक्रीमा रेकर्ड राखेको छ । यही वर्ष उनको दोस्रो कम्पनी स्पेस एक्स अन्तरिक्षमा एस्ट्रोनट पठाउने पहिलो निजी कम्पनी बन्यो ।
नेपालमा कतिजना महिषपाल बंशी राजाहरुले शासन गरेका थिए?
महिषपालवंशी वा आभिरवंशी राजा वर सिंह, जय सिंह, भुवन सिंहले १६१ वर्ष शासन गरे, यि राजाहरु निप जातिका थिए(गोपाल वंशावली अनुसार १६१ बर्ष आधिकारिक मानिन्छ तर कर्क प्याट्रिकले १११ बर्ष शासन गरेको भनेका छन)
नेपालमा शासन गर्ने पहिलो किराँति राजा को हुन?
नेपालमा २९ पुस्ताका ३२ किराँति(भेडापाल्ने) राजाले १५०० बर्ष शासन गरेका थिए, किराँतकालिन पहिलो राजा यलम्बर र अन्तिमः गस्ति हुन, किरातहरु हाङ वंशका थिए, यिनीहरु भारतको हस्तिनापुरबाट नेपाल आएको मानिन्छ । यिनिहरु मुन्धुमका आधारमा शासन गर्थे, छैटौं किराँती राजा हुमतीको पालामा महाभारत युद्ध चलेको र पाण्डव पक्षबाट लड्न जितेदोस्ती कुरुक्षेत्र गएका थिए । तेस्तै हुँमतिकै पालामा किँरातरुपी महादेव र अर्जुनबिच पशुपति क्षेत्रमा युद्ध भएको मानिन्छ ।
गोदावारीमा १२ वर्षे मेला चलाउने सोमवंशी राजा को हुन?
राजा निमिष सोमबंशी प्रथम राजा हुन उनले शासनकेन्द्र गोदावरीमा दरबार बनाएका थिए । सोमबंशी ५ वटा राजाहरुले किराँत र लिच्छिवी संग समानान्तर सरकार चलाएका थिए, सोमबंशी अन्तिम राजा भाष्कर वर्मा हुन ।
नेपालमा द्घैध शासन सुरुगर्ने लिच्छवी राजा को हुन?
लिच्छवी कालमा द्घैध शासन को थालनी बसन्तदेवको पालामा भएको थियो भने अन्त्य गर्ने लिच्छिवी राजा नरेन्द्रदेव हुन । नरेन्द्रदेव मानदेव र अंशुवर्मा पछिका तेस्रो शक्तिशाली लिच्छवी राजा थिए । यनिलाई लिच्छविकालीन आकाशको पूर्णचन्द्र भनेर चिनिन्छ ।
कुन राजाको शासन काललाई लिच्छवीकालिन स्वर्णयुग भनिन्छ ?
-अंशुवर्माको शासन काल
राजाको उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने नियम राजा अंशुवर्माले चलाएका हुन । बालकको सालनाल काट्ने चलन, युवराजधिराज घोषणा गर्ने चलन, पाञ्चाली प्रथाको थालनी गरेका यिनले पशुपतिनाथलाइ राजमान्यता(राष्ट्रिय देवताको मान्यता) दिएका थिए ।
किर्तिपुरमा कुन लिच्छवी राजाले बस्ती बसालेका थिए?
किर्तीपुरमा शिवदेव प्रथमले, कान्तीपुरमा गुणकामदेवले, भक्तपुरमा आनन्ददेवले, ललितपुरमा वरदेवले, हाडिगाँउमा बलदेव र गोकर्णमा मानदेवले बस्ती बसालेका हुन ।
लिच्छवीकालमा महासामन्त भनेर कसलाई चिनिन्थ्यो?
लिच्छवीकालमा महासामन्त भनेर प्रधानमन्त्रीलाइ,अमात्य भनेर मन्त्रीलाइ, सामन्त भनेर प्रशासकलाइ, गौल्मिक भनेर सेनानायकलाइ, भट भनेर सिपाहिलाइ, प्रधान भनेर ग्राम प्रशासकलाइ चिनिन्थ्यो ।
चौविसे राज्यमध्येको पाल्पाका अन्तिम राजा को थिए?
पाल्पाका अन्तिम राजा पृथ्वीपाल सेन, तनहुका अन्तिम राजा हरदत्त कुमार सेन र लमजुङका अन्तिम राजा विरदर्मन शाह हुन। त्यस्तै प्युठानका अन्तिम राजा मोतिचन्द्र भए पर्वतका अन्तिम किर्तिवम थिए भने जुम्लाका प्रथम राजा बली र अन्तिम सुर्यमान हुन ।
Tags: (लोक तथा शिक्षक सेवा
हामिले हाम्रा बालबालिकालाई यसरी हुर्काऔं की पछि कुनै गुनासो नरहोस
महिला हिंसा विरुद्धको अभियान सम्पन्न , त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा »